Hatezerana Be Tampoka: Sakànan’i Tajikistàna Eny An-dàlana ny DHL, ny UPS Ary Ny Pony Express · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2017 13:12 GMT
Sary Pixabay. OpenClipart-Vectors / 27454. CC0 Sehatra ho an'ny daholobe.
Nanakatona orinasa iraisampirenena maromaro mpiandraikitra fandefasana taratasy toy ny DHL, UPS, TNT ary Pony Express i Tajikistàna, firenena iray izay tena mahatsiravina tokoa ny toerana misy ny asan'ny paositra. Nolazain'ny fanjakàna fa ankehitriny dia mila mahazo fahazoandàlana hiasa ireo orinasa izay ny ankabeazany efa ela niasàna hatramin'ny 25 taona nahazoany fahaleovantena.
Tamin'ny herinandro lasa ireo tranoben'ireo orinasa ao Dushanbe renivohitra dia nakatona sy nasiana tombokase ary nomena baiko ireo mpiasa tao mba hiala ny toerana, hoy ny tatitr'ireo masoivohom-baovao ao an-toerana sy iraisampirenena.
Toa hetsika mifanahin-jaza avy amin'ilay Sampandraharaha Tajik misahana ny Fifandraisandavitra, izay raha tokony ho mpanamora ny fifandraisana no asany, dia vao mainka manao izay hanakànana azy. Amin'ny ankapobeny, ilay sampandraharaha izay i Beg Sabur (Beg Zukhurov fahiny no nitarika azy, fantatra amin'ireo baiko nibahanana ireo sehatra media sosialy. Tamin'ny 2012, nobahanan'i Sabur ny Facebook — izay nampangainy ho nanaparitaka “lainga sy fanalàna baràka” — ary nandefa tsindrom-paingotra ho an'iMark Zuckerberg.
Fa misy tompony ve ity Facebook ity sa tsia e? Afaka mba tonga aty Tajikistàna ve? Te-hifanatrika aminy aho mandritry ny ora fiasàko. Raha tsy manana fotoana izy, afaka mandray solontena iray avy aminy aho.
Izany no manazava ny zava-maneso nosoratan'i Ivan Zanin , ilay Tajik iray mpampiasa Facebook, tamin'ny herinandro lasa iny:
Mba misy tompony ve ity DHL ity? Afaka tonga aty Tajikistan?
Amin'ny ankapobeny, niasa ara-dalàna tsara tao Tajikistàna ireo sampandraharaha iraisampirenena mpanome tolotra fandefasana sy fandraisana taratasy, na ohatra aza ireo mpiasan'ny DHL nampangaina ho nandefa zavamahadomelina nankany Rosia, folo taona lasa izay. Ny antony maha-lasibatra azy ireo amin'izao fotoana izao dia mety misy ifandraisany betsaka amin'ny toetra mikatsaka fanondrotana hofantrano tsy mitsahatra arakaraky ny filentehan'ny toekaren'ilay firenena.
Raha tsorina dia lasibatra malefaka ireny sampandraharaha mpandefa sy mpitsinjara taratasy ireny, izay lafo tokoa ho an'ny olontsotra Tajiks, saingy tena manampy ho an'ireo fikambanana iraisampirenena, vondron'orinasa sy masoivoho. Afaka hozongozonina hidaraboka izy ireny, tsy ilàna akory manao izay hampahatezitra ny valalabemandry.
Iray hafa, ireo ISPs (mpanome tolotra aterineto) no lasibatra tsy tapaka amin'ny ataon'ilay Sampandraharaha misahana ny Fifandraisandavitra, ireo ISPs izay tsy maintsy miankohoka amin'i Sabur, havan'ingahy filoha Tajik Emomali Rakhmon amin'ny alàlan'ny fanambadiana. Tetika iray hakàna vola avy amin'ireo ISPs “omby vavy fitery ronono” ny “Unified Electronic Communications Switching Center” kasain'ny fanjakàna handaniam-bola ho apetraka.
Araka ny notqterin'i Eurasianet tamin'ny taona lasa :
Ao anatin'ny ezaka ataony hanamafisany ny famehezana ny fivezivezen'ny vaovao miditra sy mivoaka ny firenena, napetraky ny fanjakana ny mavoivoho iray antsoina hoe “Unified Electronic Communications Switching Center,” nafohezina ho EKTs amin'ny teny Rosiana.
Amin'ny teny mivantambantana, ilain'ilay rafitra ny fifezivezena rehetra — na io avy amin'ny finday na aterineto — mba ho voasivana avy amin'ny alàlan'ny orinasa iray maka ny toeran'ny tetezana, ny Tojiktelecom ilay orinasam-pifandraisandavitra an'ny fanjakana.
“Tsy maintsy atao ny fampiharana ilay didim-panjakana ho an'ireo rantsana rehetra misehatra amin'ny fifandraisandavitra elektronika ao an-toerana,” hoy ilay didim-panjakana.
Misy mampisalasala, anefa, rehefa hitarina mankany amin'ny ho fisian'ilay ivontoerana, miaraka amin'ny fahitàn'ny maro azy io ho endrika ivelany notefena mba hiantohana ny fandoavan'ireo ISPs ny vola, izy ireo izay tsy afaka ny hisintona torohay mba misy dikany momba izay fomba fiasan'izy io. Tany am-piandohan'ity taona ity, io tranonkala io ihany no nitatitra hoe nampiasa fomba hafa ny governemanta ao Tajikistàna mba hakàna vola avy amin'ireo orinasa ireo.
Volana vitsy lasa izay, nakatona daholo ireo rehetra fandraharahàn'olontsotra mpivarotra karatra SIM ho an'ny telefaona finday, namela toerana banga ho an'ireo roa vaovao mpivarotra izay lazain'ny honohono fa an'ny zanaka lahin'i Sabur, izay vinantolahin'ilay lehilahy mahery Rakhmon ihany koa.
Misy ny honohono hoe io lehilahy io ihany koa amin'izao fotoana no miketrika ny hanokatra ISP iray vaovao. Ny fotoana no hany hilaza amintsika na hampiditra koa ilehio orinasa iray vaovao hisahana ny fandraisana sy fandefasana taratasy ho ao anatin'ny fanjakàm-pandraharahàny mandroso dia mandroso.